မြန်မာပြည်မှာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေတကယ်ရှိသလား သရ၀ဏ်(ပြည်) | dawnmanhon
မြန်မာပြည်မှာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေတကယ်ရှိသလား သရ၀ဏ်(ပြည်)
မြန်မာနိုင်ငံတွင်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုများရှိနေသည် ဟူသောစွပ်စွဲချက်မှာ ခုတစ်လော ပြန်၍ခေါင်းထောင်ထလာပေသည် ။ စွပ်စွဲသူများကတော. ထုံးစံအတိုင်း ဘင်္ဂလီများနှင်.လက်ဝါးချင်းရိုက်ထားသည် . အနောက်တိုင်းမီဒီယာများ၊အစ္စလာမ်နိုင်ငံအချို့ နှင့်ဘင်္ဂလီတို့ဘက်မှဆတ်ဆတ်ခါနာပြနေကြသောနိုင်ငံတကာ မီဒီယာများဖြစ်သည် ။
“မူဆလင်တွေကို နင်တို.ဘာလို.သတ်နေကြတာလဲ “
ဟူသောစကားကို တိုးရစ်တစ်ဦးကကျွန်တော်.ကိုမေးဖူးသည် ။ ထိုတိုးရစ်သည် မလေးရှားမှလာသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည် ။အသက် (၆၀)ခန်.ရှိပါသည် ။ သူကထိုစကားကို ရန်ကုန်လေဆိပ်သို. ရောက်လာပြီး ဟိုတယ်သို.သွားနေစဉ် မြန်မာပြည်ရောက်ရောက်ခြင်းမေးခြင်းဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော် က မြန်မာနိုင်ငံတွင် မူဆလင် ဟူ၍ သီးခြားပစ်မှတ်ထားကာ တိုက်ခိုက်နေခြင်းမျိုးမဟုတ်ကြောင်း ။ ပဋိပက္ခဖြစ်နေသောနေရာအချို.တွင် ဒေါသအလျောက် အုပ်စုနှစ်စု အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ကြသည်တော.ရှိကြောင်း ။မြန်မာလုံခြုံရေးရဲကင်းများကိုဘင်္ဂလီများကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သဖြင့် ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရခြင်း ၊တပ်မတော်မှနယ်မြေရှင်းလင်းရေးစစ်ဆင်ရေးဝင်ရခြင်းများတော့ရှိကြောင်း သို.သော် နိုင်ငံခြားကလူများထင်နေသလို တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် မူဆလင်များကိုတွေ.ရာသင်္ချိုင်း ဓါးမဆိုင်းဆိုသလို လိုက်လံထိုးခုတ်သတ်ဖြတ်နေခြင်း မရှိပါကြောင်း ။ မူဆလင်များမှာ နေ.စဉ်ဘ၀ကိုပုံမှန်သွားလာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေကြသည်ကိုမြင်နိုင်ပါကြောင်း ၊ကျွန်တော်.တွင်လည်းမူဆလင်မိတ်ဆွေများရှိကြောင်းပြောပြလိုက်ပါသည် ။သိပ်တော.ကြေနပ်ပုံမရပါ ။ သူတို.သည် အမျိုးသမီးနှစ်ဦး လာလည်ကြခြင်းဖြစ်၍ တစ်ယောက်မှာ ဂျူးဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ယောက်မှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပါသည် ။ ထို.နောက်ကျွန်တော်သည် ဆူးလေဘုရားလမ်းသို.သွားကာ ဆူးလေဘုရားနှင်.ကပ်လျက်တည်ရှိနေသည်. ဆွန်နီဂျာမေ ဘင်္ဂလီ ဗလီ ရှေ.မှ ကားမောင်းကာ ပြလိုက်ပါသည် ။ ထိုအခါ Naaznin Jetha Ismail ဆိုသောမူဆလင်အမျိုးသမီးသည် ဗလီကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည်.ပါသည်။ရန်ကုန်မြို.လည်ကောင်တွင်ဗလီတစ်ခုခန်.ခန်.ညားညားတည်ရှိနေတာကိုစိတ်ဝင်စားသွားပုံရသည် ။အထူးသဖြင်. ဗုဒ္စဘာသာ စေတီပုထိုးတစ်ခုနှင်. အစ္စလာမ်ဗလီတစ်ခု မျက်နှာချင်းဆိုင်နီးကပ်စွာရှိနေတာကိုအံ.သြသွားပုံရသည် ။ ဗလီထဲမှထွက်လာသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကိုလည်း သူတို.၀တ်ရုံများ ဦးထုပ်များဆောင်းလျက်တွေ.ရသောကြောင်.သေသေချာချာ စိုက်ကြည်.နေပါသည် ။
“ မြင်တယ်မို.လား မူဆလင်တွေ သူယုံကြည်ရာ ဘာသာကိုအေးအေးဆေးဆေးဝတ်ပြုနေတာပဲ ဘယ်သူတွေကသတ်နေလို.လဲ “
“ ရန်ကုန်မှာ ဒီလို ဗလီတွေရှိသေး လား “ ဟု အမျိုးသမီးကြီးကမေးသည် ။
“အန်တီကြီးနာဇင်းကို တစ်ခုပြချင်တယ် ။အဲဒါက ရန်ကုန်မြို.လည်ကောင်ရဲ.လမ်းတစ်လမ်းပဲ ။အဲဒိလမ်းမှာ ဗုဒ္စဘာသာ ဘုရားတစ်ဆူမှ မရှိသလို ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းလည်း တစ်ကျောင်းမှမရှိပါဘူး ။ဒါပေမယ်. ဗလီ ဘယ်နှစ်လုံးရှိနေလဲဆိုတာလိုက်ကြည်.လှည်.ပါဦး “
ထို.နောက်သူတို.နှစ်ယောက်ကို ကျွန်တော် ရွှေဘုံသာလမ်း သို.ခေါ်သွားပါသည် ။ ထိုအခါ အစိမ်းရောင်ခြယ်သထားသော အလွန်ကြီးမားသည်.(စူရ်တီ ဗလီ) ကိုစတွေ.ပါသည် ။ လမ်းဘေးတွင်လည်း ကျောက်ပွဲစားဖြစ်ဟန်တူသော မုတ်ဆိတ်ဖားများသည် လမ်းဘေးလက်ဘက်ရည်ဆိုင်များတွင်ထိုင်ကာ လက်ဘက်ရည်သောက်သူသောက် ၊စကားပြောသူပြော ၊ ကျောက် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်သူကလုပ်ဖြင်. အေးအေးလူလူ ရှိနေကြပါသည် ။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ဗုဒ္စဘာသာဝင်တွေကလာသတ်မှာစိုးသောကြောင်. ထပြေးရန် အသင်.ပြင်ထားကြပုံမျိုးမတွေ.ရပါ ။ တုတ် ၊ဒါး၊လက်နက် ကိုင်ဆောင်ထားသူများကိုလည်းမတွေ.ရပါ ။ ထို.နောက် ဆက်လျှောက်ရာဗလီကြီးနောက်တစ်လုံးထပ်တွေ.ပါသည် ။ နာရ်စာပူရီဗလီ(ခေါ်) မိုဃ်းကျဗလီဖြစ်ပါသည်။ ထိုဗလီ ရှေ.တွင်လည်း မူဆလင်များမှာအေးချမ်းစွာသွားလာဝင်ထွက်နေကြပါသည် ။ရွှေဘုံသာလမ်းအထက်ဘလောက်သို. နောက်ထပ်နည်းနည်းဆက်သွားတော.စိုင်ဖီ (Saifee) ဗလီကိုတွေ.ပါသည် ။ ထိုမျှနှင်.မပြီးသေး ရွှေဘုံသာလမ်းမှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းသို.ကွေ.သောလမ်းထောင်.တွင် ကျိုလီယာမွတ်ဆလင် ဒါရ်ဂါဗလီဟူ၌တွေ.ရပြန်ပါသည် ။ လမ်းပေါ်တွင် မူဆလင်အမျိုးသားမြောက်များစွာသာမက ၊ ခေါင်းကိုလုံအောင်ခြုံထားသောမူဆလင်အမျိုးသမီးများကိုလည်း များစွာတွေ.ရှိရပါသည် ။ထိုအခါ ကျွန်တော်.ဧည်.သည် တိုးရစ်အမျိုးသမီးကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူတိုင်းသည် လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင်.ရှိပြီး မူဆလင်များဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်နေခြင်းမရှိကြောင်း ထိုအမျိုးသမီးကြီးယုံကြည်သွားပါသည် ။ ဂျူး ဘာသာဝင်ဖြစ်သူ Ms Lom Schelew ကတော. ဂျူးဘုရားကျောင်းကို သွားကြည်.ချင်သည်ဆိုသဖြင်. ရန်ကုန်မြို. ၂၆ လမ်း ရှိ Moseah Yeshua Synagouge သို.လိုက်ပို.ရာသူအလွန်သဘောကျသွားပါသည် ။ ကျွန်တော် သူတို.ကို မေးခွန်းတစ်ခုပဲမေးလိုက်ပါသည် ။ထိုမေးခွန်းမှာ ရန်ကုန်မြို.လည်ကောင်တွင် ရွှေဘုံသာလမ်းတစ်လမ်းထဲ၌ ဗလီ သုံး၊လေးလုံးရှိသလို အီရန်တို.၊တူရကီတို့၊ ၊ဆော်ဒီအာရေဗီးယား တို. အာဖဂန်နစ္စတန်တို.တွင် မြို.လည်နေရာကောင်း၌ ဗုဒ္စဘာသာ ဘုရားစေတီသုံးလေးဆူလာတည်မည်ဆိုလျင်ထိုနိုင်ငံမှမူဆလင်များသည်ကျွန်တော်တို.လိုသဘောထားကြီးကြီးထားကာလက်ခံနိုင်ပါ.မလား ။အေးအေးဆေးဆေး ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုလို.ရနိုင်ပါ.မလားဟူသောမေးခွန်းဖြစ်သည် ။
တကယ်တော.မြန်မာနိုင်ငံလောက် ဘာသာရေးနှင်.လူမှုရေး၌ လွတ်လပ်ခွင်.ရှိသောနိုင်ငံ အတော်ရှားပါသည် ။မြန်မာလောက်သဘောကောင်းသောနိုင်ငံအတော်ရှားပါသည်။ မာလာလာတို့ပါကစ္စတန်နိုင်င့တွင် တွင် အမျိုးသမီးများအား ပညာသင်ခွင်.ပိတ်ပင်ထားချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကျားမ,မရွေး ၊ဘာသာမရွေး ပညာသင်ကြားခွင့်ရှိသည် ။ နိုင်ငံအနှံ.အပြားတွင် ခရာဇ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများ ၊ ဗလီများ ၊ အစ္စလာမ် ဘာသာရေးကျောင်းများ ၊ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းများ ၊ နတ်ကွန်းများ တော်တော်များများရှိနေသည် ။ အချို.ဘာသာဝင်များ၏ ဘာသာရေးကြွေးကြော်ဆုတောင်းသံများမှာ လော်စပီကာမှတစ်ဆင်.ပင်ကျယ်လောင်စွာရွတ်ဆိုနေကြသော်လည်း မည်သူကမျှ အနှောက်အယှက်မပေးကြပါ ။ ပါဏာတိပါတ် သူ.အသက်သတ်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်အပ်ကြောင်း ဟောပြောပို.ချသည်.ဒေသနာထွန်းကားရာနိုင်ငံ ၊ နွားနှင်.ဖက်၍ ရုန်းနေကြရသော စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၌ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် နွားသတ်၍ ပူဇော်ပွဲကြီးကိုပင် တရားဝင် ပြုလုပ်ခွင်.ပေး၍ အများပြည်သူအားလပ်ရက်အဖြစ် တရားဝင် သတ်မှတ်ပေးထားပါသည် ။ ထိုမျှ သဘောကောင်း၍ ဘာသာရေးလွတ်လပ်သောနိုင်ငံမှာ ယခုအခါ သူခိုးကလူဟစ်လျက် ပြောင်းပြန်တံဆိပ်ကပ်ခံနေရပါသည် ။ သူတို.ပြောသည်ကား လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်း ဟူသတည်း ။
လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်း ( Genocide ) ကို Cambridge Advanced Learner’s Dictionary တွင် “ the murder ofawhole group of people ,especiallyawhole nation ,race or religious group “ ဟု ဖွင်.ဆိုထားပေ၏ ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံး ၊ လူမျိုးနွယ်စုတစ်စုလုံး ၊ ဘာသာရေး အဖွဲ.တစ်ခုလုံး ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းအောင် သတ်ဖြတ်သော လူသတ်မှု ဟူ၍ အနက်ပြန်ရပေမည် ။ ထိုအဓိပါယ်အရဆိုလျင် တောမှာဖြစ်စေ မြို.မှာဖြစ်စေ ဘာသာဝင်အုပ်စုတစ်စုအစပျောက်သွားအောင် အုပ်စုလိုက်နေရာမရွေးသတ်ဖြတ် မှုကိုဆိုလိုသည်ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ထိုသို. တစ်နိုင်ငံလုံးဖြစ်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းထင်ရှားပေသည် ။ဗလီထဲမှအေးအေးလူလူထွက်လာသော ၊ လမ်းဘေး၌ အေးအေးလူလူလက်ဘက်ရည်ထိုင်သောက်နေသည်. မူဆလင်လူ.အဖွဲ.အစည်း ရှိနေခြင်းကိုက သူတို.ပြောသော Genocide ဆိုသည်မှာ အဘယ်သို.ဖြစ်နိုင်တော.မည်နည်း ။ ဤကိစ္စနှင်.ပါတ်သက်၍ ကျွန်တော်.အသိ ဧည်.လမ်းညွှန်တစ်ယောက်ပြောသည်မှာ လူမျိုးတုန်းမသတ်ဖြတ်လို. ဒီလူတွေရှိနေတာပေါ. ၊ တကယ်သတ်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတွေ.နေမြင်နေရဦးမှာလဲ ။ စွတ်စွဲတဲ.လူတွေကလည်း ဒါလောက်တော.သိဖို.ကောင်းတယ် ။ဒါကတော.နိုင်ငံရေးအရသက်သက် တိုက်ခိုက်တာပါ ဟူသတည်း။
မကြာသေးမီရက်ပိုင်းက တူရကီသမ္မတနှင့်ဖုန်းပြောရာတွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တူရကီဒုဝန်ကြီးချုပ်ကမြန်မာနှင့်ပါတ်သက်သောသတင်းမှားများဖြန့်နေသည်ကို သမ္မတအနေနှင့်သိရှိမည်ဟုယူဆပါကြောင်း၊ တူရကီသည်လည်း PKK အကြမ်းဖက်သမားများကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ဖူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရသောအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးစိမ်ခေါ်မှုများကိုနားလည်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါကြောင်း သာသာနှင့်နာနာနှက်ခဲ့ပေသည် ။အမှန်စင်စစ် အကယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံကသာ တကယ်တမ်း အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များကို လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်နေသည်မှန်ပါက ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် ကမ္ဘာကကြည်.နေကြမည်မဟုတ်ပေ ။အဘယ်.ကြောင်.ဆိုသော် ကုလသမဂ္ဂက ၁၉၄၈ ခုတွင် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု( Genocide)ကွန်ဗင်းရှင်း စာချုပ်ကို အသေအချာ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရာ ၁၉၅၁ ခုတွင် စတင်အသက်ဝင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ မြန်မာအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၁၃ဝ ကျော်က လက်ခံအတည်ပြုထား၍ဖြစ်သည် ။
ပြသနာမှာ အစ္စလမ်ဘာသာ နှင်.ဗုဒ္စဘာသာကြား ပဋိပက္ခပြသနာမဟုတ်ပဲ ရခိုင်ဒေသအားအခြေကုပ်ယူကာ အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံ ခွဲထွက်ထူထောင်လိုသော အကြံဆိုးရှိသည်. Arakan Rohingya Salvation Army (ခေါ်) ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ ARSA ဘင်္ဂလီအကြမ်းဖက်သမား ၏နယ်မြေချဲ.ထွင်နိုင်ရန်ဝါဒဖြန်.ကျူးကျော်လာမှုကြောင်.ဤမျှလောက်ပြသနာကြီးထွားနေရခြင်းလည်းအကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည် ။ ၂၀၁၂ ရခိုင်အရေးအခင်းအပြီးတွင်ရခိုင်ပဋိပက္ခစုံစမ်းရေးကော်မရှင်က ရခိုင်လူမျိုး (၁၂၀၀ ) နှင်. ဘင်္ဂလီ (၈၀၀ ) ကိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမေးမြန်းရာ ဘင်္ဂလီများသည် ကော်မရှင်မှမေးသော မေးခွန်းများကို မဖြေခင် ရန်ကုန်သို.ဖုန်းဆက်ပြီး အကြံဥာဏ်တောင်းပြီးမှ ဖြေလေ.ရှိကြောင်း ၊အချို.မေးခွန်းများကို မမေးရခင်ကတည်းက စာရွက်ဖြင်.အဖြေကိုရေးယူလာကြကြောင်း၊ တစ်ချို.မေးခွန်းများဆိုလျင် လူတစ်ယောက်တည်းကသင်ပေးထားသည်.သဖွယ် အားလုံးတစ်ပုံစံထဲ ဖြစ်နေကြောင်း ကော်မရှင်၏အစီရင်ခံစာထဲတွင် ဖော်ပြထားပါသည် ။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားအချို.ကပြောသည်မှာ အချို.သော ဘင်္ဂလီဒေသခံများသည် တစ်ဖက်နိုင်ငံတွင် RSO ( The Rohingya Solidarity Organization ) များမှဖွင်.လှစ်သောစစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးသင်တန်းများကိုတက်ရောက်ခဲ.သည်ဟုလည်း ဆိုပါသည် ။ သဘောထားပျော.ပြောင်းသောအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အချို.ထံမှသိရသည်မှာ ရန်ကုန်မြို.ပေါ်ရှိအချို.သောဗလီများသည် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဂိုဏ်းများနှင်. များစွာနီးစပ်မှုရှိနေပြီး ၊၎င်းဗလီများမှဘာသာရေးအစွန်းရောက်အတွေးအမြင်များကို သင်ကြားမွေးထုတ်ပေးခြင်း ၊သင်ကြားလေ.ကျင်.ပေးထားသောနယ်လှည်.တရားဟောဆရာများစွာကိုရခိုင်ဒေသအပါအ၀င်မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်သို.အသုတ်လိုက်စေလွှတ်ခြင်းများရှိနေပါသည် ။ထိုတရားဟောဆရာများသည်နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပြည်သူများနှင်.အတူ ခေတ်မီဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်သည်.နိုင်ငံတော်သစ် ထူထောင်နေမှုကိုသိနားလည်နိုင်သည်.ဥာဏ်ရည်ပြည်.မီမှုမရှိကြောင်း ၊ မြန်မာ.ယဉ်ကျေးမှုဓလေ.ထုံးစံများကိုလည်းနားလည်မှုမရှိကြောင်း ။တိုင်းတစ်ပါး၏ ( အစ္စလာမ်နိုင်ငံအများစု၏)၀တ်စားဆင်ယင်မှုနှင်. နေထိုင်ပုံစနစ်ကို အစ္စလာမ်သာသနာ၏ပြဌာန်းချက်ဖြစ်သယောင် သွန်သင်မှုများပြုလုပ်နေကြကြောင်း ၊ ခေတ်မီအတွေးအခေါ်နှင်.ဗဟုသုတလွန်စွာအားနည်းကြောင်း ဝေဖန်ပြောဆိုကြပါသည် ( ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၊ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ၂၀၁၂အစီရင်ခံစာ ၊ စာမျက်နှာ ၂၄ )
ဤမျှဆိုလျင် ပြသနာမှာ ဒေသခံရခိုင်များဘက်မှသက်သက် အနိုင်ကျင်.ဖြစ်ပွားနေခြင်းမဟုတ်ကြောင်း နှစ်ဖက်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ အမုန်းတရားများကိုကြီးထွားလာအောင်ဟောပြော . သင်ကြားမှုများရှိနေကြောင်းသတိပြုနိုင်ပါသည်။အမုန်းပွားအောင်သင်ပေးသူနှင့်လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်ရန်ဦးဆောင်သူနှစ်ဖွဲ့ကြောင့်ရခိုင်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရခြင်းဖြစ်၏ ။မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူကား လူမျိုးတစ်မျိုးကိုအခြားလူမျိုးတစ်မျိုးက ဂျီနိုဆိုက်ဟုခေါ်သော သတ်ဖြတ်ခဲ.ခြင်းမျိုး ဘယ်တုန်းကမှမရှိခဲ.ပါ ။
မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတစ်ခုကိုပြပါဟုဆိုလာလျင်မူကား အုပ်ချုပ်ရေးကင်းမဲ.နေသော ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ခေတ်ပျက်ကြီးအတွင်းက ၁၉၄၂ တွင် ဗူးသီးတောင်နှင်.မောင်တော မြို.နယ်များတွင်ဖြစ်ပွားခဲ.သော လူမျိုးရေးအဓိကရုန်းကိုပြရပါမည် ။ ဘင်္ဂလီများမှလက်နက်အင်အားလူအင်အားအလုံးအရင်းဖြင်. မောင်တောနှင်.ဗူးသီးတောင်မြို.နယ်များရှိ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားကျေးရွာများကိုတိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ဖျက်ဆီးပစ်ကာ ထိုတိုက်ခိုက်လုယက်ဖျက်ဆီးမှုကြောင်. ရခိုင်လူမျိုး နှစ်သောင်းကျော် သေဆုံးခဲ.ရပြီး ရခိုင်ကျေးရွာပေါင်းများစွာ ဖျက်ဆီးခံခဲ.ရကာယခုအချိန်အထိ ပြန်လည်နာလန်မထူနိုင်တော.ပဲ ဘင်္ဂလီများကြီးစိုးရာ ဒေသဖြစ်သွားရသည်. သမိုင်းကြောင်းသာရှိခဲ.ဖူးပါသည် ။၁၉၈၈ တွင်လည်း လုံခြုံရေးအားနည်းနေမှုကိုအခွင်.ကောင်းယူကာ ဘင်္ဂလီများကမောင်တောမြို.အားသိမ်းယူရန်ကြိုးစားခဲ.ဖူးသည် ။ ဘင်္ဂလီအင်အားစုစုပေါင်း (၅၀,၀၀၀ ) ခန်.ရှိသော်လည်းရဲနှင်.လုံထိမ်းတပ်ရင်းတို.ကပြန်လည်ခုခံနိုင်ခဲ.သောကြောင်. ၎င်းတို.၏ကြိုးပန်းမှုမအောင်မြင်ခဲ.ပါ ။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ. ( RLO )သောင်းကျန်းသူအဖွဲ. ဦးဆောင်သော ဘင်္ဂလီအင်အား (၅၀၀၀ )ခန်.သည် မောင်တောမြို.သို.ရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာကာ ဗုဒ္စဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းများကိုဖျက်ဆီးခြင်း ၊ ဗုဒ္စဘာသာဝင်များနေထိုင်သော ရပ်ကွက်များကိုမီးရှို.ခြင်း ၊ရခိုင်လူမျိုးမှန်သမျှကိုသတ်ဖြတ်ပြီး မောင်တောမြို.ကိုသိမ်းပိုက်ရန်အပြင်းအထန်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းများကိုပြုလုပ်လာခဲ.ရာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ.မှု ပြန်လည်ခုခံတားဆီးကာကွယ်နိုင်ခဲ.ပါသည် ။
ထို.ကြောင်. မြန်မာနိုင်ငံတွင် မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုမရှိပါ ။ ရှိပါသည် ဟု ဆိုလာပါက ရခိုင် လူမျိုး နှစ်သောင်း ( ၂၀,၀၀၀ ) ကို ဘင်္ဂလီတို.သတ်ဖြတ်ခဲ.သော Genocide ဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကရှိခဲ.ပါကြောင်းပြောပြပါရစေ ။
dawnmanhon: မြန်မာပြည်မှာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေတကယ်ရှိသလား သရ၀ဏ်(ပြည်)